Madaxweynihii Jamhuuriyadda Donetsk Oo Qarax Lagu Dilay.
Sunday September 02, 2018 - 07:23:25 in Wararka by
Wadanka Ukraine Warar la helayo ayaa sheegaya in Hogaamiye sare oo ahaa mucaarad gacan saar laleh dowlada Ruushka, sameystayna Jamhuuriyad isaga u gaar ah oo ka go'day dalka Ukraine lagu dilay bartamaha magaalada Donetsk, kadib markii qarax miin
Wadanka Ukraine Warar la helayo ayaa sheegaya in Hogaamiye sare oo ahaa mucaarad gacan saar laleh dowlada Ruushka, sameystayna Jamhuuriyad isaga u gaar ah oo ka go'day dalka Ukraine lagu dilay bartamaha magaalada Donetsk, kadib markii qarax miino lagula eegtay goob maqaayad ah oo uu ka cunteynayey.
Hogaamiyaha oo lagu magacaaba Alexandaro Zokharishniko ayaa sameystay Bishi Abril sanadkii 2014 Maamuluu ugu magac daray Jamhuuriyada Shacabka ee Donetsk waxa uuna magaala madax ka dhigtay isla magaalada Donetsk oo ah halka lagu dilay maalinki shalay ahaa.
Qaraxa oo ahaa mid xoogan ayaa ka dhacay bartamaha maqaayada oo uu kulan kula lahaa qaar katirsan waziirada xukuumadiisa oo uu kujiro wasiirka Maaliyada oo isna goobta ku dhaawacmay sida ay wararku sheegayaan.
Wakaalada wararka DAAN ee hoos tagta Maamulka hogaamayaha la dilay ayaa shaacisay in Alexandra dhaawac xoogan uu kasoo gaaray qaraxa kadibna loola cararay isbitalka Magaalada, inkastoo marki danbe uu u geeriyooday dhaawacii soo gaaray.
Inta la xaqiijiyey hogaamiyaha Jamhuuriyada Donetsk iyo 4 qof oo kale ayaa qaraxan ku geeriyooday, waxaana ku dhaawacmay ilaa lix ruux oo kale oo uu kamid yahay waziirka Maaliyada Xukuumada gooni u goosadka ah ee Jamhuuriyada Shacabka Donetsk.
Sarkaal katirsan maamulka magaalada oo goor sii danbeysay isna warfidiyeenada la hadlay ayaa sheegay in hogaamiyahooda lagu dilay weerar argagixiso oo abaabulan, balse ciidamada police-ka ay gacanta ku dhigeen dhowr qof oo lala xiriirinayo inay falkan ku lug lahaayeen, hadana ay socdaan baaritaanadooda, dhawaana ay soo bandhigi doonaan wixii macluumaad ah oo ay helaan.
Dowladaha Ukraine iyo Ruushka oo labaduba ka hadlay dilka Hogaamiyaha mucaaradka ah ayuu mid kastaaba kan kale dusha ka saaray masuuliyada dilki ka dhacay bartamaha magaalada Donetsk ee loo geystay Alexandra oo xiriir dhow uu kala dhexeeyey dowlada Ruushka.
Taliyaha sirdoonka dowlada Ukraine ayaa ka dhawaajiyey in hogaamiye Alexandra uu khilaaf kala dhexeeyey dowlada Ruushka, kaas oo salka ku haya qaab maamulka magaalada dhacda bariga wadanka Ukraine ee Donetsk , khilaafkaasna uu sababay in loo adeegsado gacmo qarsoon oo laga takhaluso, wuxuuna masuuliyada dilka dusha ka saaray xukuumada Moskow.
Sidaas si lamid ah Xukuumada Moskow ee uu hogaamiyo Vladimir Putin ayaa ku eedeysay xukuumada Kiev inay ka danbeysay dilka Masuulkan mucaaradka ah ee ka goostay xukuumada Ukraine, inkasto taliyaha sirdoonka xukuumada Ukraine uu warkaas si adag kaga hor yimid oo uu masuuliyadiisa isaga fogeeyey.
Ninka la dilay ayaa sanadki 2014ka ku dhawaaqay Maamul uu ugu magac daray jamhuuriyada Shacabka ee Donetsk, xilligaas oo wadanka Ukraine ay ka soconayeen dagaalo xoogan iyo fatqalado amaan daro, wuxuuna kamid ahaaa hogaamiya kooxeedyadii la saftay dowlada Ruushka ee weerarada kusoo qaaday Dowlada Ukraine markii ay ku dhawaaqday inay dowlada ruushka ka go’day oo ay qaadatay madaxbanaanideeda.
Alexandra Zokharishniko ayaa noqonaya hogaamiyihi ugu magaca weynaa ee lagu dilo wadanka Ukraine 4ti sano ee lasoo dhaafay, halkaas oo lagu dilay siyaasiyiin badan oo mucaarad ahaa iyo Tobanaan kun oo shacab ah wixii ka danbeeyey sanadki 2014ka oo ay dilaaceen dagaalada ka soconaya wadanka Ukraine, kadib marki dowlada Ruushka ay xoog ku qabsatayJazeerada Alqirim oo wadanka Ukraine katirsan.